तेक्वान्दोमा ब्ल्याकबेल्ट नायिका - Tesro Ankha
संगम राईलाई आमनेपालीले दर्शकले ‘झ्याइँकुटी झ्याइँ’ कि ‘लभ्ली’ भनेरमात्र चिन्छन् । ‘झ्याइँकुटी झ्याइँ’ नेपाली टेलिभिजनको पर्दामा पदार्पण भएपछि मात्र उनको परिचय नेपालमा फैलिएको हो । तर, उनी भोजपुरी फिल्मकी चर्चित नायिका हुन् भन्ने थोरैलाई मात्र जानकारी छ ।
‘खामार सोजनवा साथ निभाई’, ‘हामार संगम’, ‘हाम तोहरा दिल जी सक’, ‘मुखियाजी के लभस्टोरी’ आदि उनका भोजपुरी भाषाका चलचित्र प्रदर्शन भइसकेका छन् ।
संवत् २०४४ मा बुवा गणेशकुमार बान्तवा राई र आमा मैयाँ राईको कोखबाट तीन भाइ र एक बहिनीमध्ये जेठी छोरीका रूपमा उनले उदयपुरको ठोक्सिलामा जन्म लिएकी हुन् । उनको पितृपरिवार सुनसरीको धरानमा रहेका छन् । उनको आफ्नै परिवार भने सानैदेखि काठमाडौंस्थित सीतापाइलामा रहँदै आएको छ । सीतापाइलामा अध्ययनसँगसँगै तेक्वान्दो खेलमा समाहित भएपछि उनले उक्त खेलमा ब्ल्याकबेल्ट लिएकी छन् । तर, सानैदेखि कलाकारिताले गर्दा खेललाई नै जीवन बनाउन नसके पनि खेललाई चटक्क छाडेकी छैनन् । कलाकारितातर्फ लाग्नमा उनलाई उनको ममीले साथ दिनुभएको कुरा उनी निर्धक्क बताउँछिन् ।
काठमाडौंमा आएर खेलक्षेत्रका साथै कलाकारितामा सक्रिय हुँदै गर्दा भोजपुरी चलचित्रका लागि कलाकार चाहिएको छ भन्ने सुनेपछि वीरगन्ज पुगेका कारण उनको कलायात्रा विहारमा जमेको हो । ‘म त सानी नै थिएँ तर मलाई नायिकामा फिट गराएर लगे । म आफैंलाई हिरोइनको उमेरमा नपुगेजस्तो लागे पनि खै के–के गराएर तरुनी पो बनाए,’ उनले भनिन् ।
भोजपुरीले त मोटी नायिका खोज्छन् रे नि ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘म मोटी नै त छु नि, हेर्नुस् त ! मलाई स्लिम मन पर्छ । तर, भोजपुरीका लागि अफर आयो भने एक महिनादेखि मोटाउन सुरु गर्नुपर्छ ।’ मोटी खोज्नुका कारण खाइलाग्दी हुनु त्यहाँको कल्चरमा राम्रो हुनु हो कि भन्ने उनको ठम्याइ छ । मोटोपनमा सेक्स अपिल पनि त ज्यादा हुने कुरामा भने उनले प्रतिवाद गरिन् । भोजपुरी चलचित्रमा बढीजसो चोली, घाँघर लगाउँछन् । चोली, घाँघरमा कहाँ सेक्स अपिल नहुने बताउँछिन् ।
केही नेपाली नायिका भोजपुरी चलचित्रमा जमेका छन् । उनीहरूले आफ्नो अनुभवमा नायिकालाई अन्डा र टमाटरले हान्ने कुरा बताएका थिए । तर, लामो समयमा पट्नामै बसेर भोजपुरी फिल्मी इन्डष्ट्रिज राम्ररी बुझेकी संगमले ‘एउटा चाडमा सडकमा हुलका हुल युवायुवती हिँड्छन् । त्यसबेला अन्डा र टमाटरले हान्ने गरिन्छ । केही नेपाली नायिका त्यो चाडको बेला पुगे होलान् र अन्डा र टमाटरको लोला खाए होलान् । र, नेपाली मिडियामा यो कुरा राखेको हो,’ स्पष्ट पारिन् ।
लामो समय भोजपुरीमा संघर्ष गर्दा नेपालमा सँगसँगै कला सिकेकाहरू कहाँ–कहाँ पुगिसकेको उनको बुझाइ छ । अनि उनले पट्ना छाडेर नेपाल आउने प्रयत्नकै क्रममा पुराना चिनजानका आधारमा कलाकार दमन रुपाखेती र शेखर खनालले झ्याइँकुटी झ्याइँमा लभ्लीको भूमिकामा प्रतिस्थापन गरेर नेपालमा चर्चित हुने वातावरण तयार गरे । ‘उहाँहरूले मलाई यहाँ ल्याएर ज्यादै ठूलो गुन लगाउनुभएको छ । उहाँहरू मेरो नेपाली सिनेजगत्मा गडफादरजस्तै बन्नुभएको छ,’ उनी रुपाखेती र खनालप्रति नतमस्तक छिन् ।
लभ्लीको भूमिका झन्डझन्डै स्वीटीको जस्तो छ । तर, स्वीटीको लवज पूरा दार्जिलिङे र उनको लवज अहिलेका युवकयुवतीले बोल्नेखालको रहेको प्रस्ट्याँउदै उनले भनिन्, ‘स्वीटीको लवज पहिले नै चर्चित भइसकेकाले गर्दा मेरो लवज पनि त्यस्तै बुझिदिएकामात्र हुन् ।’
झ्याइँकुटी झ्याइँबाहेक नेपाली कथानक चलचित्र ‘फिफा वल्र्ड कप अफ नेपाल’, ‘उदयपुरे कान्छा’, टेलिचलचित्र ‘को आफ्नो को बिरानो’, ‘प्रयास’, ‘परिस्थिति विकृति’ र तराई टेलिभिजनमा ‘गाइके त्रिशूल’ मा अभिनय गरेकी उनले शिव परियार, रामचन्द्र काफ्ले, आनन्द कार्की, राजेशपायल राईका गीतमा समेत काम गरेकी छन् । तर, यत्तिका काम गर्दा पनि कमेडी चर्चित हुनुका कारणबारे उनको बुझाइ छ, ‘अहिले देशको परिस्थिति नै त्यस्तै छ । त्यसैले गर्दा होला ।’
प्रस्तुति : देवेन्द्र सुर्केली
२०७४ जेष्ठ २७ १३:२४